OPDO’n waajjira ABO nii cufsiisuu Waajjira warra Baaladaraa | Kichuu
OPDO’n waajjira ABO nii cufsiisuu Waajjira warra Baaladaraa
Posted on May 27, 2019 by kichuu_admin
OPDO’n waajjira ABO nii cufsiisuu Waajjira warra Baaladaraa immoo magaalaa Finfinnee Piyyaassaatti akka banatan taasisan. Kun seenaa biyya sanaa keessaatti waan addaati. Fira jibbisiiseetu orma jaallachiisaam!
Just listen to what #Daneil #Kibret the right hand man of Dr. Abiy said about small minority Muslim in axum!
Mootummaan federaalaa kun yoom of kabajsiisa garuu? Torbaan haga tokko dura poolisni federaalaa waamicha mana murtii Geetaacho Asaffaaf geessuuf Tigraay deemee achitti hidhame. Amma ammoo naannoon Amaaraa humna tikaa mootummaa federaalaa irraa garasitti ergaman doorsisaa jira. Yakkamtoota Gumoozota ajjeesan, Kamisee irratti lola banananii fi kan biroo toyannoo jala oolchuuf gara sanitti ergamnaan ”hayyama keenya malee nam tokko qabamee as keessaa hin bahu” jechaa jiru. Yakkamaan yakkam mul’ataa raaw’ate yoo jarri itti hin amanne malee yakkamaa hin jedhamu, qabamuus hin danda’u jechuu dha. Mootummaan Dr. Abiyyi mataa isaa qofa osoo hin taane Oromoo tuffachiisaa jira jedhee kanin torbaan muraasa dura dubbadhe kanaafi.
Itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannoo Amaaraa Jeneraal Asaamminoo Tsigee mootummaa Federaalaatti bookkisaa jira.
Dubbiin akkana: naannoo Amaaraa keessatti bakkoota rakkooleen itti uumamte humni Federaalaa qorataa jira. Oromoota Wallo irratti weerara liyyuu hayliin naannoo Amaaraa raawwatte dabalatee bakkoota akka Jaawwii kan ajjeechaa dhalattoota Gumuuz irratti raawwate, naannoo Gondaritti rakkoo Qimaanti fi Amaaraa qorachaa jiru. Garuu Jeneraal Asaamminoo Tsigee humna Federaalaa qorannoof naannoo Amaaraa keessa jiru kana akka beekkamtii isaan biraa hin qabnetti dubbata. Akkasumas mootummaa Federaalaa beekkamtii isaaniitiin ala nama tokkollee qabee akka achii baasuu hin dandeenyes akeekkachiise.
Namtichi waa malee hin bookkisu. Humni Federaalaa bulchaa Aanaa Jaawwii Dastaaw Shimallisii fi ajajaa Poolisii aanaa Jaawwii inspekitar Kaasaa Dires too’annaa jala oolchan jedhamee ture. Haasofni isaa tarkaanfii RIB fudhate balaaleffataa jiraachuu mul’isa. Innis jara kanatti akka hin dabalamne sodaa qabaachuu mala. Rakkoolee uumaman keessaa harka qabaachuu isaa yoo mootummaan Federaalaa irra gahe badii isaa dhoksuuf ummatatti irkatee of baraaruuf tattaaffii godhaa jirus ta’uu danda’a. Cuunfaatti dubbii namichaa irraa wanti calaqqisu mootummaa Federaalaa tuffachuu fi ummata qabatee Federaalatti duuluuf qophiirra jiraachuu isaati.
Uummatni Oromoo dhaaba isaa addaan baasee beeka. Waan isa boqochiisuus beeka. Uummata Oromoo Shaambuu simannaa ABO’f taasiisan kan baatii dheeraa duraa.
Dhaloota siyaasa quufe IBIDDOO
ታዳሚዎች የጠ/ሚ ዐብይ አሕመድን መምጣት በመጠባበቅ ባንዲራቸዉን እያዉለበለቡ በሃገሪኛ ሙዚቃ እየተዝናኑ ነዉ።
Balow jette Fungeenkoo
Abbichuun Maal Jechaa Jiraa Osuma Jennuu
SIMBIRTUU: Itti baha marii Waajjira Pirezedaantii MN Oromiyaa